FESTURIS Brazil: Vietnam, Cambodia, Laos na Myanmar na-abawanye ndị nnọchi anya Eshia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » FESTURIS Brazil: Vietnam, Cambodia, Laos na Myanmar na-abawanye ndị nnọchi anya Eshia
Akụkọ mkpakọrịta • Akụkọ kacha ọhụrụ na Brazil • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Kambodia • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ mgbasa ozi Laos • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • Akwụkwọ akụkọ Myanmar • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Ihe ngosi njem nlegharị anya nke Gramado (FESTURIS) na-aga n'ihu itinye ego na itinye ego na-adọta mba ụwa. Vietnam, Cambodia, Laos na Mianmaa so na ndị ọhụrụ ga-ebipụta mbipụta a, na-agbasawanye itinye aka na Asia na mmemme ahụ. A ga-ewebata ihe ndozi mara mma na ihe ọdịnala na ọdịnala nke mba anọ ahụ site na Images Travel, nke na-ezube ịgbasa azụmahịa ya na Brazil na Latin America.
“Ọ ga-abụ oge mbụ anyị na Brazil ma anyị kwenyere na ikere òkè na Festuris bụ ụzọ kachasị mma iji chọpụta ahịa Brazil ma kwalite ụdị anyị na mba ahụ. Ahịa na-agbasa ngwa ngwa na Vietnam, Cambodia, Laos na Myanmar. Agbanyeghị, anyị rịbara ama na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na nnukwu ndị na-eme njem nlegharị anya, nke na-enweghị ike ịnye ọrụ na-agbanwe agbanwe na nke ahaziri iche. Anyị na-atụ anya izute a chọrọ, ”oru ngo CEO nke Images Travel, Timo Bry.
Na 2018, Vietnam natara ndị ọbịa nde 15.4, mmụba 20% karịa afọ gara aga. Cambodia na Laos na-agbasawanye ikike ha dị ka ebe njedebe, na-anata nde mmadụ 6.2 na nde 3.8 n'afọ gara aga. Njem nleta na-anọchi anya otu akụkụ dị mkpa nke mba GDP nke mba ndị a.
GVA na-enye ndiiche ebe dịpụrụ adịpụ na ebe ihunanya
N'ịbụ onye a maara maka okomoko, ịdị mma, ihu igwe ịhụnanya na ebe mara mma, Monaco ga-abụ otu n'ime ebe nkiri agbamakwụkwọ, na-egosi ike niile njem nlegharị anya nke agbamakwụkwọ. Seychelles, Jordan na Norway ekwenyewokwa na FESTURIS, na-enye nhọrọ dịgasị iche na Space Luxury - ebe ọ bụla nwere njirimara na njirimara ya pụrụ iche. Ebe a ga - eme njem anọ site na Global Vision Access.
“Festuris bụ usoro a haziri nke ọma. Enwere m mmasị na-elekwasị anya na ihe ọhụrụ na mbipụta ọ bụla, enwere nlezianya anya iji weta ihe ọhụrụ nye ndị so na ya, ma ndị na-eme ihe ngosi na ndị ọkachamara na-ahụ maka njem. N'ezie, ogo ndị ọrụ njem na ndị ọrụ dị mma ma ọ bụ otu n'ime ihe kpatara anyị ji eso ndị ahịa anyị eme ihe ngosi kwa afọ. Ihe ọzọ dị mkpa bụ Luxury Space, ebe nloghachi ahụ dị ka ndị na-akwado ya na-enwe nzukọ ezubere tupu oge eruo na ndị na-azụ ahịa, "ka onye nduzi Global Vision Access bụ Gisele Abrahão na-ekwu.
Hotels Hard Rock, Nobu Hotels na Unico 2087 kwadoro na FESTURIS
Kwado otu ndị ngosi gosipụtara na International Tourism Fair of Gramado (FESTURIS), nke na-ewere ọnọdụ site na November 7 ruo 10, 2019, RCD Hotels na-etinye ego ọzọ na ihe omume ahụ na-eweta ọrụ nlekọta nke mba ụwa.
Hard Rock Hotels All Ahụmịhe Ahụ (Cancun, Los Cabos, Punta Cana, Riviera Maya na Vallarta) ga-anọ na Wedding Space - ngalaba agbamakwụkwọ pụrụ iche, otu n'ime ndị na-eto ngwa ngwa na ahịa ndị njem. E gosipụtara aha ndị isi atọ ndị ọzọ maka Space Luxury - Nobu Hotel Miami Beach, Nobu Hotel Los Cabos na Unico 2087 Hotel Riviera Maya.
“Ọ bụ ihe ọ toụ ikwenye ọnụnọ anyị ọzọ na Festuris Gramado's Luxury Space na isonye na nke mbụ na oghere Agbamakwụkwọ ọhụrụ ahụ. Festuris bụ ezigbo ndị ngosi ziri ezi ma anyị na-ahụ usoro nhazi oge a yana nzukọ ejiri n'aka na ụlọ ọrụ ahụ mara mma, ọ na-ewe ọtụtụ ohere, kọntaktị na ahịa, "ka RCD Hotels Sales Director, Carla Cecchele na-ekwu.
Ndị minista na-ahụ maka njem nlegharị anya ga-ekwu okwu na ụbọchị njem nlegharị anya Africa November 25, 2021